Al Shabaab oo soo bandhigay muuqaalka Askari Kenyaan ah oo lagu qabtay Weerarkii Ceelcadde
Home » WARARKA MAANTA » Al Shabaab oo soo bandhigay muuqaalka Askari Kenyaan ah oo lagu qabtay Weerarkii Ceelcadde	Al Shabaab oo soo bandhigay muuqaalka Askari Kenyaan ah oo lagu qabtay Weerarkii Ceelcadde
19/05/2017	299 Views Muuqaal laga soo duubay Alfred Danyi Kilasi oo ah askari Kenyan ah oo lagu qabtay weerarkii Al Shabaab sanadkii hore ee ay ku qaadeen fariisin Ciidanka Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Ceelcade ee gobolka Gedo ayaa fariin u diray Madaxweynaha iyo Shacabka Kenya.
Alfred Danyi Kilasi ayaa ka codsaday shacabka Kenya in ay u midoobaan sidii looga saari lahaa gacanta Al Shabaab oo mudo ay ku jiraan.
“Laga soo bilaabo markii uu dhacay dagaalkii Ceelcadde ilaa hadda waxaan ku jirnaa Jeelka Al-Shabaab anagoo maxaabiis ah, welina wax war ah kama helin dowladeena. Ma aanan helin wax caawin, sidaas darteed waxaan shacabka Kenya ka codsaneynaa in ay u midoobaan arinteena, una raadiyaan xal lagu soo afjarayo Mushkiladda na heysata” ayuu yiri.
Isagoo hadalkiisa siiwata ayuu sheegay in Uhuro Kenyaata uu ahaa Madaxweyne xiligii la xirayay islamarkaana uu wali yahay hogaamiyaha dalkaasi, waxana uu tilmaamay uu ka warhayo dhibka heysta, balse aysan helin hal dhanbaal oo xagiisa ka yimid.
Alfred ayaa ku tartarsiiyay Madaxweyne Kenyaata in uu sameeyo xalkasta oo looga saarayo gacanta Al Shabaab si ay ula midoobaan qoysaskooda oo aad uga murugoonaya.
Bilowgii sanadkii 2016kii ayay aheyd markii dagaalamayaal ka tirsan Al Shabaab ay weerar kula kalaheen Xero Ciidamada Kenya ay ku lahaayeen deegaanka Ceelcade ee gobolka Gedo.
Previous: Ciidamada AMISOM oo madaafiic ku garaacay Degaanka Hoostaga Gobolka Sh.Hoose
Next: Kheyre oo todobaadkiiba laba jeer la xisaabtamaya Wasiiradiisa